နေအိမ် » ပြိုင်ပွဲ » ရှင်ချန်းစွန့်စားမှု
ကစား: 400,899 tag ကို: Adventures ဂိမ်း, Shin ဂိမ်း, ဆိတ်သငယ်ဂိမ်း, Shin chan, Shin chan games, Crayon Shin-chan, shin-chan games, Crayon Shin-chan games
ဒီချစ်စရာနည်းနည်းတူးပေးမည့်သူများအရင်းအမြစ်များနှင့်ဘဏ္ဍာရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသူ့ကိုကူညီပေးမလဲ သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်ပိုက်ဆံဝင်ငွေနဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ကိုဝယ်ကြလော့။ သငျသညျအရာခပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ပြုပါမည်ဆိုပါက, သင်မကြာမီကြွယ်ဝသောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
ဒီစိတ်ကူး fly'n'shoot ဂိမ်းထဲမှာသင်ကဆက်လက်ရှင်သန်ရန်သုံးသတ္တိအာကာသကြောင်ကိုကူညီသင့်ပါတယ်။ သုံးဇာတ်ကောင် - Grampy ကြောင်, ဖရဲသီးထုပ်ကြောင်နှင့် Necktie ကြောင် - ဤကောင်းတဲ့ဂိမ်း၌သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
မှော်ခင့်နိုင်ငံတော် allelopathy သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ပေမယ့်နှစ်ဦးကိုအထူးစွမ်းရည်စွဲ wizard ကိုမှနေရာဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်လည်းတနေ့, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစွမ်းရည်၏မရှိခြင်းတက်သည်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, သူတို့ကအဖြစ်, 200teeth စုစုပေါင်းတစ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သစ်တောထဲမှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အင်အားသုံးပတ္တမြားကြားသိ
ဤတွင်စူပါဆိလာပါတယ်။ ရထားပေါ်တွင်ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်ရမှတ်ဂိုးသွင်းရန်အဖြစ်ဝေးသင်သည်သင်၏လမ်းပေါ်ကြယ်တို့သည် can.Collect အဖြစ်ခရီးသွားလာ။ အခြားမော်တော်ယာဉ်များအပေါ်စီးမှပစ္စည်းတွေစုဆောင်းပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
ဒါဟာအချို့ဘဲအရွယ်မြင်းကိုတက်ရိုက်နှက်ဖို့အချိန်ပဲ! စူပါဘဲလာကြတယ်၌သင်တို့အသေခံရန်, ရှိသမျှအချိန်များမဟုတ်သောတိုက်ပွဲအချို့နဲ့လက်စွပ်သို့လှဲချဟောင်း-timey လက်ဝှေ့သမား၏ထိန်းချုပ်မှုယူပါ! 100 ကဘဲအရွယ်မြင်း, သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်းအရွယ်ဘဲ Fight! 20 အထက်ခ
တစ်ဦးမှဲ့ Whack - အခိုးရတနာများအတွက်ရှာဖွေသည်။ နိုငျငံတျောသညျထှကျရှိလာရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီ! အဆိုပါထှကျရှိလာပါနိုင်ငံတော်သို့ထံမှရွှေနှင့်ဘဏ္ဍာကို ယူ. တွင်း၌စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်ဝှက်ထား၏။ ဘဏ္ဍာပြန်ရရန်ထှကျရှိလာ Whack!